एकै झट्कामा भारतले गुमायो ८० अर्ब डलर, अमेरिकाले झन धेरै, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एकै झट्कामा भारतले गुमायो ८० अर्ब डलर, अमेरिकाले झन धेरै
एजेन्सी। जलवायु परिवर्तनको कारणले गएको २० वर्षमा भारतमा झण्डैं ८० अर्ब डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। संयुक्त राष्ट्रले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा यस्तो जानकारी दिइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
‘आर्थिक क्षति, गरिबी र आपदाः १९९८ देखि २०१७’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनको असर र विश्व अर्थव्यवस्थामा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको मूल्यांकन गरिएको छ। यो संयुक्त राष्ट्रको जलवायु सम्बन्धि विभागले आपत जोखिमलाई कम गर्नका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन हो ।
आर्थिक हानिमा १५१ प्रतिशत वृद्धि
यो प्रतिवेदनमा १९९८ देखि २०१७ को बीचमा १५१ प्रतिशतले क्षति बढेको उल्लेख छ ।
यस समयमा विश्व अर्थव्यवस्थाले २९०८ अर्ब डलरको प्रत्यक्ष हानिको सामना गरेको छ। यो गएको दुई दशकको भन्दा दुई गुना बढी छ। बुधबार जारी गरिएको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दैं गएको जनाएको छ । कुल आर्थिक घाटामा प्रमुख मौसमी घटनाहरूबाट हुने हानिहरूको अंश ७७ प्रतिशत छ, जुन २२४५ अरब डलरको नजिक छ।
यसरी, १९७८ देखि १९९७ को बीचमा प्रत्यक्ष वित्तीय हानि ८९५ अर्ब डलर थियो। अमेरिकामा झण्डैं ९४५ अर्ब डलर, चीनको ४९२ अरब भन्दा धेरैं , जापानको ३७६ अरब भन्दा धेरै, भारतमा ८० अर्ब अमेरिकी डलर आसपास रहेको छ।
बाढी, पहिरो र भूकम्पको कारण बढी युरोपेली देशहरू अधिक आर्थिक हानि हुनेहरुको शीर्षमा छन्। फ्रान्सले ४८ अर्ब डलर भन्दा धेरै, जर्मनीको ५८ अरब डलर आसपास र इटालीको झण्डैं ५७ अरब डलर बराबरको क्षति भएको छ।